Gmail Attachment တွေကို Google Drive မှာသိမ်းနိုင်ပြီ ~ The ICT.com.mm Blog
Gmail Attachment တွေကို Google Drive မှာသိမ်းနိုင်ပြီ
Gmail Attachment တွေကို Download လုပ်စရာမလိုဘဲ Google Drive မှာသိမ်းနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ Attachment ပါတဲ့ အီးမေးကို ဖွင့်ကြည့်ရင် Preview Option ကိုတွေ့ ရမှာဖြစ်ပြီး အဲဒီပေါ်ကို Mouse Cursor တင်ကြည့်ရင် Google Drive မှာသိမ်းနိုင်မယ့် Option ကို တွေ့မြင်အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။ သင့်ကွန်ပြူတာကို ဒေါင်းလုပ်လုပ်ချင်ရင်လည်း ရပါတယ်။ Attachment တွေကို Google Drive မှာ ဖိုဒါတွေခွဲခြားသိမ်းဆည်းနိုင်ပါတယ်။
Newer Electronic Tattoo ထိုးပြီး ဖုန်းပြောလို့ ရတော့မည်
Older ဒေါ်လာ နှစ်ထောင်တန် Hisense ရဲ့ ငါးဆယ့်ငါး လက်မ 4K Smart TV
Gmail အကောင့် ၅ သန်းဖောက်ခံရပြီးနောက် WordPress က အကောင့်တစ်သိန်း password ချိန်း
စက်တင်ဘာလအတွင်းက ဒုတိယပတ်လောက်မှာ ရှရှားအင်တာနက်ဖိုရမ်ဖြစ်တဲ့ Bitcoin ဖိုရမ်မှာ Gmail အကောင့် usernames နဲ့ passwords ပေါင်း ၅ သန်းလောက...
Apps, Featured, How-to, News, Review
Email အသုံးပြုမှု အချိန်ကိုလျှော့ချပြီး လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကို မြှင့်တင်ကာ မိမိအလုပ်ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ခြင်း
Posted by Aung Ko Htet
သင့်အလုပ်အတွက် Email ကိုအမြဲတမ်း သင်စစ်နေရပြီလား? ဒါဆိုရင် ကောင်းပြီ သင့်လုပ်ငန်းအတွက် Email စစ်ဖို့အချိန်တွေ သီးသန့်ပေးနေစရာမလိုတော့မဲ...
အချိန်ကုန်သက်သာစေမယ့် Gmail Tricks သုံးခု
နေ့စဉ်၀င်လာတဲ့ အီးမေးတွေကို စီမံခန့်ခွဲရတာ မလွယ်ကူလှပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း သတင်းအချက်အလက် ခေတ်ကြီးထဲမှာ အောင်မြင်ဖို့ ဆိုရင်တော့ အီးမေးနဲ့...
Old Composeဖြင့် Gmailရဲ့ မူလ အီးမေးရေးသားတဲ့ ဒီဇိုင်းကို ပြန်လည် အသုံးပြုနည်း
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာ Googleက Gmailရဲ့ သွင်ပြင်ကို ပြောင်းလဲလိုက်တာကို မကြိုက်သူတွေထဲမှာ စာရေးသူလည်း တစ်ယောက် အပါအ၀င်ပါ။ ပြောင်းလဲလိုက်တာတွ...
Apps, News, Review
ဓာတ်ပုံတွေ အလွယ်တကူ ပေးပို့လို့ရလာတဲ့ Gmail
Googleက Gmailမှာ ဓာတ်ပုံတွေ အလွယ်တကူ Share လုပ်နိုင်တဲ့ စွမ်းဆောင်ချက်ကို ထည့်သွင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ Gmailမှာ အီးမေးအသစ်တစ်ခု ရေးဖို့ပြုလု...
Gmail ကို ကာကွယ်ဖို့နည်းလမ်းများ
Gmail or Google Account တွေ ခိုးခံနေရတဲ့သတင်းတွေ အင်တာနက်မှာ မကြာခဏ ကြားနေရပါတယ်။ အလုပ်အတွက်ပဲသုံးသုံး ၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အတွက်ပဲသုံးသုံ...
Gmail မှာ အီးမေး ၀င်လာရင် အချက်ပေးမယ့် Checker Plus for Gmail
Gmail မှာ ၀င်လာတဲ့ အီးမေး အသစ်တွေကိုကြည့်ဖို့ Gmail Web Page ကို ဖွင့်ထားပြီး သွားစစ်ရတာ အလုပ်ရှုပ်ပါတယ်။ ဘယ်၀က်ဆိုက်ကို ကြည့်နေသည်ဖြ...
GMAIL မှာ Image တွေကို Default အနေနဲ့ ပြသနိုင်ပြီ
အရင်က Gmail မှာ “Display Image Below” ဆိုတာကို ကလစ်နှိပ်ခဲ့ ရတဲ့ နေ့ရက်တွေ မကြာခင်မှာ ကုန်ဆုံးတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် Goog...
Gmailမှာ Storage Space နည်းနေပြီလား? ဒီနည်းတွေနဲ့ Email တွေကို ရှင်းပါ
Google က အရင်က Gmail Storage ကို 10 GB ပေးထားပါတယ်။ အခုတော့ Google Drive က Storageပါ ပေါင်းပြီးပေးတဲ့အတွက် Google အကောင့်တစ်ခုမှာ စ...
Gmailမှာ Contactsတွေရဲ့ Social Profilesတွေကိုပါ ဖော်ပြပေးမယ့် Rapportive
Screen shot 1 Gmailမှာ Contactတစ်ယောက်စီက အီးမေးကို ဖတ်တဲ့အခါမှာ ညာဘက် Sidebarမှာအဲဒီ Contactရဲ့ Social Profileတွေကို တွေ့မြင်ချ...
2-Step Verification အသုံးပြုပြီးသင့်အကောင့်တွေကို ကာကွယ်ပါ။
Internet က တစ်ချို့ Web Services တွေက 2-Step Verification ကို အသုံးပြုခွင့် ပေးထားပါတယ်။2-Step Verification ဆိုတာ သင့်အကောင့် တွေကို Pa...
အသစ်ထွက်ရှိလာသော Gmail Inbox Interface
Google Play မှာရယူနိုင်ပြီးတော့ Mobile Deviceတွေအတွက် အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် Android 4.0 နဲ့အထက်မှာမှ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထူးခြားကတေ...